Mitsangàna mba hanasa machine
Mila manohitra ny fanamiana ny milina fanasan-damba dia ilaina mba hampihenana ny vibration mandritra ny fandidiana azy. Alohan'ny hanapahanao hevitra fa ilainao ity sehatra ity, ataovy azo antoka fa efa napetraka ny milina, satria ny antony mahatonga ny fikorotanana mafy dia ny fametrahana ny fitaovana ampiasaina ao an-trano.
Nefa na dia aorian'ny fametrahana tanteraka ny tongotr'ilay milina aza, dia mihamafy be mandritra ny fiasa izy io, fotoana izao ny mampiasa sipa manokana ho an'ny milina fanasan-damba. Mendri-piderana izy ireo ary tsy mahomby. Fa na dia mitranga aza izany, dia tsy sarotra ny manolo izany.
Mitsangana eo ambany tongotr'ilay milina fanasana
Ireo fitaovana ireo, ankoatra ny fampihenana ny familiana ny milina, dia mampihena ny tabataba ary tsy mamela azy hitsambikina sy hidina, mihodina manodidina ilay efitrano. Ny tranon'ilay milina dia mety ho karazany maromaro - rubber sy silicone. Noho izany dia mety ho fotsy (loko matevina - mainty) na mangarahara tanteraka. Ampidiro mivantana eo amin'ny tongony efatra amin'ny milina izy ireo.
Ny isam-bolana isam-bolana dia 4-5 cm. Tadidio fa mety tsy mety amin'ny fitaovana maoderina sasany izy ireo. Indrindra indrindra fa mihatra amin'ny fitaovana apetraka izany, satria miaraka amin'ny sehatra ny fiakaran'izy ireo ary tsy tafiditra ao anatin'io tohatra io izy ireo.
Safidy hafa hiadiana amin'ny vibration dia ny matoatoa faninganana vibration. Voapetraka eo ambanin'ny masinina izy io, fa tsy eo ambanin'ny tongotra tsirairay. Toy izany koa ny fihetsika - mameno ny feo sy ny vibration izy, tsy mamela ny milina "mandeha" mandritra ny asa.
Matetika no lafo kokoa noho ny manda, satria lehibe kokoa izy io. Alohan'ny fampiasana ity fitaovana ity miaraka amin'ny milina iray izay mbola eo ambany fiantohana, dia lazao raha azo atao ny mametraka zavatra eo ambany milina. Ny zava-misy dia ny mpanamboatra sasany mandà fiantohana servisy amin'ny tranga toy izany.
Topper ho an'ny sofina
Ahoana ny mampifandray ilay mpanonta amin'ny solosaina?
Sakafom-bozaka vita amin'ny sakafo misy ravina
Kitapo kely ho an'ny fanararaotana
Ahoana no fomba hisafidianana safodrano?
Mangatsiaka ho an'ny zazakely
Fritters - fomba mahazatra ho an'ny sakafo matsiro ho an'ny menamena
Boots amin'ny ririnina
Kitapo "Smetannik" - fomba mahazatra
Kitapo miloko amin'ny batery amin'ny tanany manokana
Vokatry ny kafe maitso
Kumquat - fikarakarana tokantrano
Sisyphean sy ny lafarinina tantalum - ny legiona iray
Inona no hanina tsy misy hena?
Vetivety ny manasa ny lamba fidiovana?
Fanambarana 10: ahoana no fomba fijery ny vatan'ny modely maivana kokoa?